Mila maimaim-poana amin’ny aterineto torohevitra araka ny lalàna
Avy eo, dia mila ny»an-TSERASERA mpahay lalàna». Noho izany, raha afaka mifandray amin’ny Aterineto dia tena fotoana, toy izany koa ny nandika ny hevitry ny teny hoe»amin’ny ATERINETO», dia afaka mampiasa ny»MPISOLOVAVA iray maimaim-POANA amin’ny ATERINETO». Ny fomba hametraka fanontaniana ny mpisolovava an-tserasera na fanontaniana ny mpisolovava an-tserasera.
Eo amin’ny fakan-kevitra an-tserasera ny mpisolovava (mpisolovava). Afaka mandray soa avy amin’ny torohevitra araka ny lalàna mivantana an-tserasera eo amin’ny tranonkala ao amin’ny ATERINETO»MPISOLOVAVA»(mpahay lalàna an-tserasera). Azonao atao ny mahazo toro-hevitra amin’ny olona avy amin’ny mpisolovava.
Izany dia tsotra ihany: tao amin’ny vohikalan’ny ny fisotroana Fikambanana»fiarovana araka ny Lalàna»ao amin’ny fizarana»ny Mpisolovava an-TSERASERA»(antsoina hoe»MPISOLOVAVA an-TSERASERA») hahita ny tsipika»Manontany ny mpahay lalàna». Alohan’ny hanokafana ny lisitry ny fanontaniana ireo izay tsy maintsy mifidy ny iray izay mifanaraka amin’ny fanontaniana. Avy eo dia hameno ny endrika sy handefa fanontaniana any amin’ny mpisolovava an-tserasera (fanontaniana mpisolovava an-tserasera). Dia an-tserasera ny manatona mpisolovava raha vao manam-pahaizana manokana ny fisotroana Fikambanana»fiarovana ara-Dalàna»dia mandinika ireo olana sy hanome ny valiny, dia ho nandefa mailaka fampahafantarana ny valim-ny fanontaniana dia nampakatra ao amin’ny tranonkala.Dia omena ny rohy ny hamaly ny fanontaniana mpisolovava an-tserasera (fanontaniana mba mpahay lalàna)
Fahadisoana Sary Nahazoan-Karma-Ny